वरियताले ग्लोबल छनोट खेल्न पाउँछ नेपाल ? | Hamro Khelkud
वरियताले ग्लोबल छनोट खेल्न पाउँछ नेपाल ?
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – नेपाली महिला क्रिकेट टोली आइसिसी टि२० विश्वकप एसिया क्षेत्र छनोटमा तेस्रो हुँदै बाहिरियो । प्रतियोगिता अघि उपाधिको बलियो दाबेदार नेपाल हङकङसँग ६ विकेट र युएईसँग ४८ रनले पराजित भएपछि ग्लोबल छनोट खेल्ने अवसर गुमाएको हो ।
युएई ५ खेलम शतप्रतिशत जितका साथ ग्लोबल छनोटमा पुगेको छ । पाँच क्षेत्रिय छनोट खेलेका तर ग्लोबल छनोटमा स्थान बनाउन नसकेको एक टोलीले वरीयताको आधारमा अवसर पाउनेछ । नेपालको अन्तिम झिनो आशा वरीयतामा अड्किएको छ ।
२०२१ नोभेम्बर ३० अर्थात आगमी मंगलबार सम्म आइसिसीको महिला टि२० विश्व वरीयता शीर्ष ७ टोली सोझैं विश्वकपमा स्थान बनाउने छन् । आइसिसीले अन्तिम पटक महिला टि२० आई वरीयता नोभेम्बर २२ मा परिवर्तन गरेको थियो । नेपाल १६ औं स्थानमा छ । सामोआ १५ औं, पपुवा न्युगिनी १४ औं, स्कटल्यान्ड १३ औं र आयरल्यान्ड १२ औं स्थानमा छ । आइसिसीको नयाँ टि२० वरियतामा आयरल्यान्डलाई पछि पानुर्नपर्ने हुन्छ ।
आयरल्यान्ड युरोप क्वालिफायरबाट बाहिरिएको थियो । गत अगस्टमा भएको प्रतियोगितामा स्कटल्यान्डसँग पछि पर्दै आयरल्यान्ड बाहिरिएको थियो । सोमोआ र पपुवा न्युगिनी इस्ट एसिया प्यासिफिक क्षेत्र छनोटमा छन् । तर कोरोना महामारीको कारण उक्त प्रतियोगिता हुन सकेन । सोमोआ र पिएनजी मध्य मंगलबार जारी हुने वरियतामा शीर्षस्थानम रहने टोलीले ग्लोबल छनोटमा स्थान बनाउने छन् ।
के नेपाल छनोट हुनसक्छ ?
नेपाल प्रतियोगिता सुरुहुनुअघि १४ औं स्थानमा थियो । अहिले १६ औं स्थानमा पुगेको छ । जसको कारण आइसिसीले परिवर्तन गरेपनि मिति सार्वजनिक नगरेको अनुमान गरिएको छ । त्यसले गर्दा नेपालको सम्भावना कम छ । नेपाल वरियताकाको आधारमा छनोट हुन आयरल्यान्डलाई पछि पार्नुपर्छ । नेपालले खेलेका ५ मध्य ३ मा जित र २ मा हार बेहोको छ ।
नेपालको रेटिङ ८ खेलमा १ सय २४ र आयरल्यान्डको २० खेलमा १ सय ६० रेटिङ छ । नेपालले आयरल्यान्डलाई पछि पार्ने सम्भावना निकै कम देखिन्छ ।